‘नेपाल बन्द’ सकिएपछि विप्लवले गरे नयाँ संघर्षको आह्वान ! के छ अबको तयारी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले ‘नयाँ संघर्षमा लाग्न जरुरी भएको’ जनाएको छ । महासचिव विप्लवले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी देशको अवस्था बिग्रिँदै गएको उल्लेख गर्दै ‘जनताको वास्तविक मुक्ति ल्याउन र देशलाई बचाउन नयाँ संघर्षमा लाग्न जरुरी भएको’ बताएका हुन् ।
आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूको गिरफ्तारीविरुद्ध बिहीबार नेपाल बन्द घोषणा गरेको नेकपाले बन्द सफल भएको दाबी गरेको छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं र प्रदेश राजधानी सहितका मुख्य सहरहरूमा बन्दको प्रभाव भने परेको थिएन ।
सरकारले जनघात र राष्ट्रघातलाई झनै बढाएको विप्लवको दाबी छ । ‘देशको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिँदै गएको छ । यो सरकारले जनघात र राष्ट्रघातलाई झनै बढाएर गएको छ । त्यसैले देश र जनता असाध्यै जोखिममा पर्दै गएका छन्,’ विप्लवले भनेका छन्, ‘जनताको वास्तविक मुक्ति ल्याउन र देशलाई बचाउन एकपटक फेरि नयाँ संघर्षमा एक भएर लाग्न जरुरी भइसकेको छ ।’
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य सुदर्शन, पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की, केन्द्रीय सदस्य तथा महिला संगठनकी अध्यक्ष बन्धु चन्द लगायत विप्लवका कयौं नेता कार्यकर्तालाई सरकारले गिरफ्तार गरेको छ । विप्लव समूहका गतिविधि अपराधीकरणतर्फ उद्यत रहेको ठहर गर्दै सरकारले फागुन अन्तिम साता प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयसँगै विप्लवले प्रतिबन्धको प्रतिरोध गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । विप्लवले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् ।